Howlgallo saakay ka socda Magalada Boosaaso | Radio Banadir
Home Wararka Howlgallo saakay ka socda Magalada Boosaaso
Jimco, 17 May 2019 (RBB News) – Ciidamada Booliska Puntland ayaa saakay waxaa ay howlgallo kala duwan ka wadaan xaafado ka tirsan magalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari,halkaas oo xalay uu ka dhacay qarax lala eegtay gaari ay wateen Ciidamo ka tirsan puntland,waxaana qaraxaas ku dhaawacmay lab askari.
Howlgalka ayaa Ciidamada waxaa ay ka sameynayaan xaafado ka tirsan Magalada Boosaaso iyo wadooyinka waaweyn, iyada oo la baarayo Gaadiidka noocyadiisa kala duwna ee ka Shaqeeya Gudaha Magalada iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay.
Saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa waxaa ay Warbaahinta u sheegeen in howlgalka lagu qabqabtay dad u badan dhalinyaro,kuwaas oo ay uga shakisan yihiin inay qeyb ka yihiin kuwa falalka amnidarro ka wada Magalada Boosaaso.
Magaalda Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa bilihii u dambeysay amnigeeda uu noqday mid aan wanaagsaneyn,waxaana todobaadyadii la soo dhaafay Magalada ka dhacayay qaraxyo qaarkood lala eegtay mas’uuliyiin ka tirsan Puntland.
Previous articleSaraakiishii kormeerayaasha Imtixaanka oo kasoo baxay deegaanada Hir-Shabeelle
Next articleDhageeyso: Warka Subax ee Radio Banadir 103.4 mhz 17/5/2019